कम्युनिष्ट नेताहरु पढाई कसको कति ? हेर्नुहोस् -
कम्युनिष्ट नेताहरु पढाई कसको कति ? हेर्नुहोस्
काठमाडौं। नेपाली राजनीतिमा सक्रिय र चर्चामा रहेका नेताहरुमा औपचारिक डिग्रीको हिसावले काङ्ग्रेस अगाडि छ । जस्तो सुकै कालमा पनि उनीहरुले औपचारिक शिक्षालाई छोडेनन् । तर, कम्युनिष्ट नेताहरु भने औपचारिक पढाइलाई खासै महत्व दिएनन् । यधपी ज्ञानका दृष्टिले भने कम्युनिष्ट नेताहरु नै अगाडि देखिन्छन् । किनकि, भूमिगत काल प्रायः नेताहरुले स्वअध्ययनमै बिताए । उनीहरुसँग शैक्षिक प्रमाणपत्र त छैन । तर, ज्ञानमा अब्बल छन् । हामीले यहाँ नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरु मध्य १५ जना नेताहरुको शैक्षिक योग्यताको बारेमा छोटोमा चर्चा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले झापाको आदर्श माविबाट २०२८ सालमा एसएलसी उत्र्तीण गरेका हुन् । भूमिगत जीवनका कारण औपचारिक शिक्षा कम भए पनि १४ वर्षे जेल जीवनका क्रममा उनले राम्रो स्वअध्ययन गरेका छन् । उनी नेपाली साहित्य, राजनीति, कुटनीति र समाजशास्त्र र नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी भाषामा दख्खल राख्छन् ।
(२) प्रचण्ड (नेकपा अध्यक्ष)
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कृषि विषयमा बिएस्सी गरेका छन् । २५ वर्ष लामो भूमिगत जीवन र सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गरेका प्रचण्डसँग दर्शन, इतिहास, अर्थशास्त्र, कुटनीति र नेपाली साहित्यको राम्रो ज्ञान छ । उनी चलाख र प्रतिभाशाली मानिन्छन् । प्रचण्ड नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी भाषामा दख्खल राख्छन् ।
(३) माधव कुमार नेपाल (पूर्व प्रधानमन्त्री)
(४) मोहन बैध किरण (अध्यक्ष नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी)
नेपाली कम्युनिस्ट राजनीतिमा सादा जिवन र उच्च बिचारको रुपमा चिनिने ‘किरण ‘को औपचारिक रुपमा स्तातकोत्तर सम्मको अध्ययन छ । उनि एक बिचारकको रुपमा परिचीत छन भने कम्युनिस्ट दर्शन र साहित्य क्षेत्रमा बौध नै हावी देखिन्छ । उनि प्रचण्डका राजनीतिक गुरु समेत हुन ।
(५) डा. बाबुराम भट्टराई
पूर्व प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले इन्जिनियरिङमा विद्यावारिधि गरेका छन् । भट्टराई नेपालका नेताहरुमा सबैभन्दा बौद्धिक नेता मानिन्छन् । राजनीति, अर्थशास्त्र, दर्शन, कुटनीति, समाजशास्त्र लगायतका धेरै विषयमा उनको गहिरो ज्ञान छ । उनी नेपाली, हिन्दी, मैथिली, अंग्रेजी लगायतका भाषामा दख्खल राख्छन् ।
(६) नेत्रविक्रम चन्द (नेकपा महासचिव)
स्नातकसम्मको औपचारिक अध्ययन गरेका माओवादी भुमिगत हुदैका नेता तथा कमान्डर विप्लव अहिले पनि अर्धभूमिगत छन् । नेता विप्लवसँग कुटनीति, दर्शन, इतिहास र संगठनमा राम्रो ज्ञान छ। विप्लवसँग ‘मास’लाई प्रभावित गर्नसक्ने वाक कला , लेखन र साहित्य क्षेत्रमा अब्बल नेताका रुपमा परिचीत छन । उनि एक इमानदार बहादुर नेता भनेर चिनिन्छन ।
(७) प्रदीप ज्ञवाली (नेता नेकपा)
मन्त्री ज्ञवालीको औपचारिक शिक्षा एसएलसीसम्म मात्र छ । तर, उनी दर्शन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहासमा गहिरो ज्ञान राख्छन् । पञ्चायत कालको धेरै समय स्वअध्ययनमा बिताएका ज्ञवाली नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी भाषामा दख्खल राख्छन्, ज्ञवाली नेपालका बौद्धिक नेताहरुको कोटी पर्छन् ।
(८) वर्षामान पुन (नेता नेकपा)
(९) पम्फा भुसाल (नेता नेकपा)
स्नातकसम्म औपचारिक शिक्षा लिएकी नेतृ भुसाल पूर्वमन्त्री हुन् । मन्त्री भुसाल राजनीति र संगठनका क्षेत्रमा राख्ने दख्खल राख्छिन् । नेपालका महिला नेताहरुमध्ये उनी अग्रभागमा छिन् ।
(१०) योगेश भट्टराई (नेता नेकपा)
भट्टराईले समाजशास्त्र र मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । नेता भट्टराई युवा पुस्ता र बौद्धिक समुदायमा लोकप्रिय छन् । अध्ययनशील नेता भट्टराईले सामयिक राजनीतिमा राम्रो प्रभाव राख्छन् ।
(११) गोकर्ण बिष्ट (श्रम मन्त्री)
(१२) जनार्दन शर्मा (नेकपा नेता)
(१३) लालबाबू पण्डित
(१४) मातृका यादव
आइएडसम्मको औपचारिक शिक्षा लिएका मन्त्री यादव माओवादी नेता पनि हुन् । मधेशमा राम्रो पकड राख्ने मन्त्री यादव आदर्शको राजनीति मन पराउँछन् ।
पढ्न उमेरले छेक्दैन, ७० वर्षमा एमए पास
यी हुन् अर्थशास्त्रमा ‘टप’ गर्ने डोल्पाका गोठालो
त्रिविले गर्यो नतिजा प्रकाशित, यसरी हेर्नुहोस् रिजल्ट
अब शिक्षकको पनि निजामती कर्मचारीको जस्तै बढुवा हुने
कक्षा ११ को परीक्षामा विज्ञान विषयतर्फ अरबिन नेपाल प्रथम !